O'Food ကိုအကန့်အသတ်မဲ့သာခံပြီး Mac App Store | ငါက Mac ကပါ
O'Food ကိုရပ်ပါ၊ Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပါ
O'Food ရပ်ပါ များသောအားဖြင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် 4,99 €နှင့်ကန့်သတ်အချိန်အဘို့ဖြစ်၏ လုံးဝအခမဲ့။ Stand O'Food သည်အချက်အချာကျသောအချက်အပြုတ်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည် ကစားသမားသန်း Mac, PC နှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်။ သင်၏နေရာမှမထွက်ခွာမီဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောဖောက်သည်များကိုအစာကျွေးပါ။။ ဘာဂါကိုပိတ်ပြီးဘေကွန်ကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ကြော်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဒါကအမြန်နှုန်းလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး သငျသညျစုစည်းဖို့ရှိသည်။ မှန်ကန်တဲ့အစီအစဉ်ကိုလိုက်ပြီးအသားညှပ်ပေါင်မုန့်လုပ်ပြီးပြproblemsနာမရှိဘဲနောက်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်လုပ်နိုင်ဖို့သင်ကိုယ်တိုင်စုစည်းပါ။ condiments များ ၀ ယ်ရန်နှင့်သင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဆင့်မြှင့်ရန်အတွက်ငွေရှာပါ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာယခင်ကထက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာအစေခံရန်။ မတ်တပ်ရပ် O'Food သည်သင့်ပါးစပ်၌ကောင်းသောအရသာဖြင့်သင့်ကိုထားခဲ့ပါလိမ့်မည်။
ငါဒီဂိမ်းကိုကျွန်တော့်အိုင်ပက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့ဖူးတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ငါအချိန်ကောင်းကောင်းရခဲ့တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကအမြဲတမ်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေလို့ပါ၊ စပိန်။ ဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးမှာဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်တွေကိုနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ချန်ထားခဲ့ပါ Mac က App Store ကိုအဘို့အသကဲ့သို့ အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး.
ဂိမ်းကစားနည်း ၂ ခု - စိန်ခေါ်မှုနှင့်ညစာအချိန်
မ de de niveles 100
ဖန်တီးရန်အသားညှပ်ပေါင် 80 ကျော်
ဝယ်ယူရန်နီးပါး 20 အဆင့်မြှင့်တင်
ဂိမ်းထဲမှာရရှိနိုင်: အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, အီတလီ, ဂျာမန်, españolရုရှား။
အကောင်းဆုံးဟမ်ဘာဂါ Turner နှင့်အမြန်ဆုံး။
အရွယ်: 22.9 ကို MB
ဘာသာစကား: စပိန်၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အီတလီ၊ ရုရှား
ကုန်ချ O'Food ရပ်ပါ တိုက်ရိုက်ကနေ Mac က App Store ကိုအောက်ပါ link ကိုမှ။
ငါလည်းမင်းကိုထားခဲ့ပါ မတ်တပ်ရပ်O'Food® (အပြည့်) ကိရိယာများအတွက် App Store မှ iOS ကိုလည်းလုံးဝဖြစ်သော ကန့်သတ်အချိန်အခမဲ့.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » O'Food ကိုရပ်ပါ၊ Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပါ
Tim Cook: Apple Watch ရောင်းအားတက်နေပြီ
Apple Store ၏ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်လက်ဆောင်ကဒ်များကိုဒေါ်လာတစ်သန်းနီးပါးခိုးယူနေသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်